Nin 108-sano jir ah oo xabsi laga sii daayay! | IshaBay Dhaba
Nin 108-sano jir ah oo xabsi laga sii daayay!
Posted by admin on Jun 19th, 2011 and filed under Asia, KEYDKA SAWIRADA IYO XULKA WARARKA. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
Maamulka Xabsiga dhexe ee India ayaa sii daayay nin 108-sano jir ah oo ku edaysnaa dil uu u gestay qof oo saxibo ahayeen. Ninkaan oo 84-sano jir ahaa markii lasoo xiray ayaa ku gaaray xabsiga dhexdiisa 108-sano isagoo noqday ninka ugu wayn bulshada India oo gaaraya hal bilyeen (1Billion).
Dalka Indiya ayaa ah dalka labaad ee Aduunka ugu tirada badan marka laga soo tago dal waynaha China.
“Ninkaan oo lugu magacaabo Briji Bihari Pandey ayaa laga sii daayay xabsiga ka dib markii cafimaadkiisa xalis galay ayna tabar loo waayay in la daryeelo”; waxaa sidaa yiri maamulka xabsiga .
Pandey waa nin ka mid bulshada loo yaqaano “Hindu Priest” waxuuna ka soo jeedaa qaybta waqooyi ee dalka oo maamusha maamul goboleedka Utter Pradesh.
Waxaa lugu sheegay ninkaan in uu yahay ninkii ugu waynaa taariikhda India oo xabsi galay!
Maamulka xabsiga ayaa yiri ka dib markii ay nagu adkaatay in aan daryeelno ninkaan ayaan codsi u dirnay maxkamada dhexe si loo sii daayo, maxakamadiina waa ay naga ogolaatay; S.K Sharma ayaa sidaa u sheegay warbaahinta